Umthunzi omhlophe wePale ngeProcol Harum - Izinto Zobugcisa
Umthunzi omhlophe wePale ngeProcol Harum
Umculi weengoma zeProcol Harum uKeith Reid wabhala amagama kule ngoma. Kudliwanondlebe kunye neeNgoma, wachaza wathi: 'Luhlobo lwefilimu, enyanisweni, ukuzama ukuguqula imeko kunye nokubalisa ibali. Imalunga nobudlelwane. Kukho abalinganiswa kwaye kukho indawo, kwaye kukho uhambo. Ufumana isandi segumbi kunye nokuziva kwegumbi kunye nephunga legumbi. Kodwa ngokuqinisekileyo kukho uhambo oluqhubekayo, ayisiyiyo ingqokelela yemigca enamathelene kunye. Inomsonto obaleka ngayo. ' UReid wayenombono wesihloko xa wayefika kuye ethekweni, elamnika indawo yokuqala yengoma. Uthi uReid: 'Ndiva neengoma ukuba unikwe isiqwenga sephazili, inkuthazo okanye nantoni na. Kule meko, bendinesihloko esithi, 'Umthunzi oMhlophe wePale,' kwaye ndacinga, Kukho ingoma apha. Kwaye yenza iphazili elingana nesiqwenga onaso. Ugcwalisa lo mfanekiso, uwufumana wonke umfanekiso lowo siqwenga singena kuwo. '
UReid wenza iProcol Harum ngo-1967 kunye noGary Brooker, waba lilungu elisemthethweni nangona engazange acule okanye adlale naziphi na izixhobo. 'Umthunzi omhlophe wePale' yenye yeengoma ezili-15 awazibhalayo kwicwecwe labo lokuqala.
U-Reid uthi: 'Sasivuya kakhulu ngayo kwaye sayithanda kakhulu. Kwaye xa sasizilolonga kwaye siqhele-iingoma zethu zokuqala ezilishumi elinanye okanye kunjalo, yayiyenye evakala ilungile. Kodwa babekho abanye abambalwa esabathandayo ndingathi ngokulinganayo- sinengoma kwicwecwe lethu lokuqala elibizwa ngokuba 'ziintsuku zesaladi (balapha kwakhona)' eyayingumbangi onamandla. Kwiseshoni yethu yokuqala, sasika iingoma ezine, kwaye 'iWhite Shade yePale' yeyona irekhode kakuhle. Ngezo ntsuku yayingengombuzo wokuba ulunge kangakanani ingoma yakho? Ngaba kulungile kangakanani ukurekhoda ongayenza? Kungenxa yokuba yayishicilelwa ngokusisigxina, kwaye ukuba ubungenayo injineli enkulu yesandi okanye istudiyo besingalunganga, usenokungafumani irekhodi livakala kakhulu. Kwaye ngasizathu sithile yonke into kwiseshoni yethu yokuqala ye studio yaphuma ivakala ilunge kakhulu. '
I-Procol Harum yayinezinto ezimbalwa ezazithobekile, kubandakanya 'iHomburg' kunye 'neConquistador,' kodwa batsala abalandeli abazinikeleyo, bekhupha ii-albhamu ezilishumi ngaphambi kokuba bohlukane ngo-1977 (baya kuphinda benze ifom ngo-1991). Ibhendi yayihlala ichaphazeleka kakhulu ngumgangatho kunye nokuthembeka komculo wabo kunokuba isebenze kwimakethi engatshatanga, nto leyo engathandekiyo ukuba ibe yeyenye yezona ngoma ziphumelele ngalo lonke ixesha. Xa ii-Songfacts zazithetha noGary Brooker ngesihloko ngo-2010, wachaza wathi: 'Yintoni le ibethwayo? Ndicinga ukuba nayiphi na ingoma eza kubamba abantu ngokukhawuleza kwaye ihlale nabo okwethutyana. Kwenzeka ntoni ngengoma eba yinto edumileyo kukuba abantu bafuna ukuyiva kwakhona, kufuneka bayive kwakhona. Ke ngoko, oko kufuna oko sikubiza ngokuba 'ngamagwegwe,' akunjalo? Kwaye amagwegwe anokuba lulo lonke uhlobo lwezinto, anokuba kukujika nje okuncinci kwingoma. Rhoqo abantu abangazomculo, abavelisi kunye nabantu beenkampani ezirekhodayo, ngabo abachola ukuba yintoni ikhonkco. Isenokuba yinxalenye engabalulekanga yengoma kuwe, kodwa ngequbuliso leyo yinxalenye yengoma ekubambisayo. Leyo yinxalenye yokukuloba kwaye ikungenise ngaphakathi. Ke ukuba ucinga enye, kuya kufuneka ubenamagwegwe kunye / okanye kufuneka ubenento eyahluke mpela kuyo yonke enye into ekufutshane. Ndicinga ukuba 'uMthunzi oMhlophe wePale' wawela kolo didi, into enje- yeyiphi intombazana yaseIreland eyayiyingoma yeNkosana? ' Akukho nto ithelekisayo '? Zinamakhonkco amaninzi kuyo, nayo. Kwakuhluke kakhulu kuyo nayiphi na into eyayijikeleze umculo, eludongeni kwaye inomdla. Asisoloko sifuna oko sikuvileyo kwiveki ephelileyo. Oko akuthethi ukulandela iifashoni kunye neemfashini ezenza impumelelo, zihlala zizinto ezichaseneyo. Ukuya-apho-kungekho-mntu-angoyikisayo ukunyathela. '
UGary Brooker ukhumbule ukubhalwa komculo kudliwanondlebe naye Uncut Imagazini kaFebruwari 2008: 'bendimamele umculo weklasikhi omninzi, kunye nejazz. Emva kokudlala i-rock kunye ne-R & B iminyaka, i-vistas zam zivulekile. Xa ndadibana noKeith, ndibona amazwi akhe, ndacinga, 'Ndingathanda ukubhala into kuloo nto.' Babengabonakali, kodwa oko akunamsebenzi. Akunyanzelekanga ukuba uyazi ukuba uthetha ukuthini, ukuba nje unxibelelana nomoya. 'Umthunzi omhlophe wePale' ubonakala ngathi ungabantu ababini, ubudlelwane nokuba. Yinkumbulo. Kwakukho ukushiya, kunye nosizi malunga nayo. Ukufumana umphefumlo wezo ngoma ngamazwi, ukwenza abantu bazive ukuba, yayiyimpumelelo.
Ndiyakhumbula mhla yafika: izitanza ezine ezinde kakhulu, ndacinga, 'Nantsi into.' Ndenzeke kwipiyano xa ndizifunda, sele ndidlala umbono womculo. Yangena amazwi kwisithuba seeyure ezimbalwa. Izinto zinokuphiswa. Ukuba ulandela umkhondo we-chordal element, wenza ibha okanye ezimbini zeBach ' Umoya kwi-G String ngaphambi kokuba ihambe. Loo ntlantsi yayikukuthatha konke. Khange ndizihlanganise namatye neklasikhi, yinto nje yokuba umculo kaBach wawukum. '
Kwangokunjalo Uncut Udliwanondlebe, uKeith Reid ukhumbule ukubhalwa kwamazwi: 'Bendihlala ndisiya kubona iifilimu ezininzi zaseFrance kwiAkhademi eseOxford Street (London). Pierrot le fou yenze impembelelo enamandla kum, kwaye Kunyaka ophelileyo eMarienbad . Ndathathwa kakhulu ngo-surrealism, uMagritte noDali. Ungazoba umgca phakathi kwembali yokwaphuka kunye nomoya weefilimu zaseFrance kunye 'neWhite Shade Of Pale.'
Bendimamele umculo ukusukela ndaneminyaka eli-10, ukusuka ku-'56 ukuya ku-66 -i-Beatles, Dylan, Stax, Ray Charles. Ixesha le-'White Shade of Pale 'yayisisiphelo seminyaka eli-10 yokumamela. Kodwa eyona mpembelelo yam iphambili yayinguDylan. Ndabona indlela ayenza ngayo, indlela awayedlala ngayo ngamagama. Ndadibana noPete Townshend ngoGuy Stevens (indoda ye-A & R kunye nomphathi wokuqala weProcol Harum), kwaye wabeka igama lam phambili xa iCream ikhangela umbhali weengoma. Emva koko uGuy wandibeka kunye noGary. Ndandibhala ngalo lonke ixesha. 'Umthunzi omhlophe wePale' yayilelinye iqela lamazwi. Ndinegama elithi 'umthunzi omhlophe omhlophe,' oko kwakuqala, kwaye ndazi ukuba yingoma. Kufana nejigsaw apho uneqhekeza elinye, emva koko wenza bonke abanye ukuze ulingane. Bendizama ukuguqula imeko yokucinga ngokungathi ndithethe ngokuthe ngqo, ibali lamakhwenkwe amantombazana. Ngokuphahla kwendlu kude negumbi lingxola ngakumbi, bendifuna ukupeyinta umfanekiso wesigcawu. Khange ndizame ukuba yimfihlakalo ngale mifanekiso, andizami kuba yinto evuselelayo. Ndicinga ukuba kubonakala ngathi yindawo eguqukayo endiyichazayo. Kodwa ndandimncinci kakhulu ukuba ndingaze ndibenako nakuphi na ukubola, emva koko, inokuba benditshaya xa bendikhulelwe, kodwa hayi xa ndandibhala. Yayichukunyiswe ziincwadi, hayi iziyobisi.
Yayiphindwe kabini, iivesi ezine. Eyesine yayingeyoyolahleko inkulu, kodwa wawunalo lonke ibali kwisithathu. Xa ndeva ngento eyenziwe nguGary ngabo, kwabonakala kulungile. Saziva sinento ebaluleke kakhulu. Ngokukhawuleza xa siyidlalela nabani na, sifumana impendulo kwangoko.
Ekuziqhelaniseni, izixhobo zongezwa. Sinolu luvo kwisandi seProcol Harum yokuba lilungu leHammond, ipiyano kunye neblues yegitare. Akukho qela limbi lalinayo loo nto; yasinika isandi esikhudlwana. Ushicilelo oluphilayo… ndicinga ukuba sithathe ezintathu. Amalungu alinganayo uDylan kunye neStax. Ngokwemigaqo yethu, besihlala sizama ukwenza irekhodi lomphefumlo. Ngovuyo ngokwaneleyo, u-Otis Redding wayefuna ukuyenza, kodwa sasifuna ukuba irekhodi lethu livele kuqala, kwaye uStax wayefuna kuphela.
'Iintombi ezinyulu' zazingabafundisikazi abangcwele abazintombi zaseVesta, isithixokazi seziko kunye nekhaya. Kwakukho abathandathu kubo abakhethwe ngamaqashiso kwaye bafunga ukungatshati. Umsebenzi wabo oyintloko yayikukugcina umlilo oyingcwele weVesta. Umsebenzi weVestal uzise imbeko enkulu kwaye wanika amalungelo awongezelelekileyo kubafazi ababekhonza kuloo ndima. I-Vestals yayihlala e-Atrium Vestae kufutshane neTyhula yeVesta esempuma yeForam yaseRoma.
Le yayiyingoma yokuqala erekhodwa nguProcol Harum. Emva kokubetha, bagxotha umntu owayebetha imigqomo kunye negitare, befaka uBarry Wilson kunye noRobin Trower - iimvumi ezinamava ezinokuphatha ukhenketho olulandelayo.
Phantse iminyaka engama-40 emva kokuba ikhutshiwe le ngoma, u-Matthew Fisher, owayedlala ilungu ekurekhodweni, wafaka isimangalo esithi ulifanele ilungelo lakhe lokubhala ngengoma ngegalelo lakhe. Ngo-2006, ijaji yavuma yaza yanika uFisher inxalenye yelungelo lokushicilela. Ngo-2008, inkundla yezibheno yase-Bhritane yalichitha ilungelo lika-Fisher lokuqokelela imirhumo ngenxa yokulibaziseka ekufakeni ibango lakhe, kodwa yaxhasa, ngesigqibo esivumelanayo, ikhredithi yomqambi eyanikezelwa yiNkundla ePhakamileyo, eqinisekisa ukuba ilungu lika-Fisher solo Inxalenye yokwakhiwa kwengoma. UFisher wanikwa imvume yokubhena kwesi sigqibo kwiNdlu yeeNkosi kwaye nge-30 kaJulayi ka-2009 iiNkosi zezoMthetho zavumelana ngamxhelo mnye kwilungu lomzimba, zalatha ukuba akukho xesha lisikelwe umda kumabango obunini phantsi komthetho wamaNgesi. Isigqibo sithetha ukuba ngoku ufumana isabelo seerhafu zerhafu kwingoma. UFisher onwabile wathi: 'Oku ibikukuqinisekisa ukuba wonke umntu uyazi malunga nendima yam ebhaleni.' Omnye wabagwebi abahlanu abaliva eli tyala, u-Baroness Hale, uthe: 'Njengomnye wabo bantu bakhumbula iminyaka yoo-60s, ndiyavuya kuba umbhali welo lungu lingalibalekiyo ekugqibeleni ufumene ukwamkelwa okumfaneleyo.'
NgoJulayi 24, 2008, umhlobo kaMatthew Fisher kunye nomlingani u-Alan Fox basixelela isizathu sokuba uFisher alinde phantse iminyaka engama-40 ukuba eze nesimangalo sakhe. Wazama amatyeli amane phakathi kowe-1972 nowama-2005, kodwa waxelelwa qho ngugqwetha ukuba wayengenalo tu kwaphela ibango eliphumelelayo. Ngokuqinisekileyo oku akuzange kuxelwe. Kuxa waye wadibana namagqwetha akhe akhoyo uJens Hill, apho waxelelwa ukuba unebango eliqinileyo kwaye wagqiba ekubeni aqhubeke. '
Le yayiyeyona nto ibalulekileyo 'yehlobo lothando' (1967). UJohn Lennon wayengumlandeli omkhulu wale ngoma.
Ividiyo yafotwa kule ngoma ebonisa iNcwadi iyicula kwiindawo ezahlukileyo zaseLondon njengoko ii-bandmades zayo zijongeka zihleli. Yenzelwe iibhokisi zeebhokisi zevidiyo, ezazidumile kwii-60s. Iinkampani ezenza aba matshini zihlawulelwa iividiyo. Kuba ezi bezihlala zibonwa kwimivalo, iividiyo ezinje ngoNancy Sinatra ' Ezi zibhotshi zenzelwe i-Walkin ' 'zazilungile, kodwa amaNgesi amahlanu abonakala ekhangeleka edada nawo anokufumana ezinye iingoma ngengoma enje nge' Mhlophe Shade Yebala. '
Kukho iindinyana ezimbini ezongezelelweyo ezazisetyenziswa nguProcol Harum ukucula kwimisitho ebukhoma. Zidweliswe kwiphepha lamazwi. U-Reid usixelele ukuba kutheni besuswe: 'Ekuqaleni yayiphindwe kabini, kwaye oko yayiyinxalenye yokuba ngelo xesha kwakukhona ukuthanda okuthile kweengoma ezinde, nokuba yiDylan okanye iBeatles' hey Jude . ' Ke bendizama ukubhala ingoma ende. Kodwa xa siqala ukuyenza yesiqhelo kwaye siyilungiselela ukurekhoda, enye yeevesi yawa nje ngokwendalo-sayilahla kwangethuba kwinkqubo. Sivile ukuba inde kakhulu, kuba, ingoma yayifana nemizuzu eli-10. Sasizilolonga ngeevesi ezintathu, ke yayibaleka malunga nemizuzu esi-7 okanye njalo, kwaye umvelisi wethu wathi, 'Jonga, ukuba ufuna ukudlala umdlalo womoya, ukuba ufuna ukuba le rekhodi isebenze, ungacinga ngokukhupha ivesi. ' Kwaye senza. Andizange ndizive kakubi ngayo kuba kubonakala ngathi isebenza kakuhle. Khange indikhathaze ngokwenene. '
Le ngoma inokuqhubela phambili kwe-chord efanayo kumabala ayo ' Xa Indoda Ithanda Umfazi nguPercy Sledge, nangona umgca wayo womculo wahluke kakhulu. Kukuqhubela phambili komculo, umgca womculo kunye neengoma zomculo ezisebenza kunye ezenza ingoma ibe yinto eyodwa yobugcisa.
Ingoma, 'Njengokuba umlingisi waxelela ibali lakhe' kuvakala ngathi kubhekiswa 'kwiMaleler's Tale,' kwincwadi yesiNgesi kaChaucer. Iimbali zeCanterbury . Eli bali liyaziwa kakuhle ngabafundi besiNgesi njengebali elihlazo okanye elibi, ebaliswa ngumsila. Ngenxa yoku, umgca, 'Kwaye ke kwathi kamva xa umguli exelela intsomi yakhe, ukuba ubuso bakhe, ekuqaleni nje bungumoya, wajika waba mhlophe ngebala' lilinge lomfana osandula ukubangela intombazana ukujika ube mfiliba ngokubalisela ibali elihlazo, ukucacisa iimpawu zakhe zokucekiseka ngenxa yezinye izinto. Njengokudanisa, ukusela.
Reid, nangona kunjalo, iyayiphikisa le ithiyori. Yathi: 'Andizange ndifunde Ibali likaMiller ebomini bam. Mhlawumbi leyo yinto endiyaziyo ndingaqondanga, kodwa ngokuqinisekileyo yayingengombono wokuba ndicaphule kwiChaucer, akukho ndlela. '
U-Annie Lennox ukhuphe eyona nguqulelo yaziwa kakhulu kwi-albhamu yakhe ka-1995 jellyfish , ukuthatha ingoma kwi # 16 e-UK nase # 101 eMelika. Nazi ezinye iinguqulelo ezitshatiweyo e-US:
Ukuthandabuza # 100, 1968
RB Izonka # 82, 1970
UHagar, Schon, Aaronson, Shrieve # 94, 1984
Abanye abaculi abazakugubungela le ngoma baquka uWillie Nelson, i-Everly Brothers, uBonnie Tyler, uJoe Cocker noSarah Brightman.
Ingoma yesixhobo sika-saxophonist uKing Curtis udlala ngasemva kweekhredithi zokuvula zefilimu ka-1988 Kunye no-I .
Ingoma iviwe kwi-NBC nakwi-Hallmark Entertainment Miniseries Ubukumkani be-10 , iiyure ezintlanu zokulungiselela malunga nentombazana ekwishumi elivisayo kunye notata wakhe ababandakanyekayo kwilizwe lamaphupha eGrimm Fairy Tales eza ebomini. Umbono unoJohn Larroquette kunye noKimberly Williams, njengotata kunye nentombi, bengena kumgxobhozo, apho iiMartroom zokuThetha zikhohlisa abo babini ukuba bazitye. Ingoma ethi 'Umthunzi omhlophe wePale' idlala kwisandi esityhafileyo ukuya kwividiyo epheleleyo.
Ngo-2004, i-UK eyenza iqela lamalungelo ePhonographic Performance Limited yabiza le rekhodi idlalwe kakhulu kumabonakude wase-Bhritane nakunomathotholo kule minyaka ingama-70 idlulileyo. Ngo-2009 kwabhengezwa ukuba le ngoma iseyeyona irekhodi idlalwayo eBritane. Imbaleki yoluhlu yayiyeKumkanikazi '' ibohemian rhapsody . ' Ezi ngoma zimbini zabelana ngokufana okungaqhelekanga-kubo bobabini igama elithi 'fandango' kwizityalo.
E-UK, le nto yakhishwa kwakhona ngo-1972, yafikelela kwi- # 13.
Le ngoma iphumelele ibhaso leBrit ye-Best Pop yaseBritane engatshatanga ngo-1952-1977. Yayiphumelele ngokudibeneyo kunye neKumkanikazi '' ibohemian rhapsody . '
UDenny Cordell uvelise lo mzila. Waba ngumphathi kaJoe Cocker kwaye ngoo-70s baqala ileyibheli erekhodiweyo ezimeleyo ebizwa ngokuba ziiShelter Records, ezenza imisebenzi yazo ibandakanya uLeon Russell, uJ. UCale noTom Petty kunye nabaphula iintliziyo.
Umculi we-rock onzima waseJamani uDoro Pesch wayigquma le ngoma kwi-albhamu yakhe yodwa ye-1989 Nje kancinci .
Incwadana kaGreg Kihn Umthunzi wePale ithatha isihloko kule ngoma. Ingoma ngokwayo ibhekiswa amaxesha ambalwa ngaphakathi kwebali.
UCharlie-Las Vegas, NV ngaphezulu kwe-2
Le ngenye yeengoma zikaBilly Joel. Uyenzile kwiholo yakhe yedolophu ka-2014 noWoward Stern, apho wathi: 'Bekuvakala kwahlukile kuyo nayiphi na into eyayinomathotholo ngelo xesha. Inenxalenye yebhodi yezitshixo eyayingumxholo ophambili kwirekhodi- Inxalenye yelungu likaMateyu Fisher. Kwakukho into ethile yomculo weklasikhi kuyo; Bendingazi ukuba zithini iingoma, kodwa indise kwenye indawo, ibisesibhakabhakeni. Umculo omninzi uthetha nawe. '
I-Procol Harum ayikho kwi-Rock and Roll Hall of Fame, kodwa ngo-2018 le ngoma yahlonitshwa kwicandelo labo lokuqala 'labangatshatanga' kunye:
'Ukujija' -Umkhangeli weChubby
'Rocket 88' - UJackie Brenston kunye neekati zakhe zeDelta
'Rumble' -Khonkco lweWray
' ULouie uLouie '- Amakhosi
'Uzalelwe ukuba Usendle' - Steppenwolf
ngokungathandabuzekiyo - intombazana nje
Uhambile waya eholweni kwaye wathetha iingoma
chuck berry ding ingoma yolwimi
phila kwaye makafe paul mccartney
xa sobabini kungafuneki sijonge amanye amazwi
uya kwisan francisco lyrics
nanku ke umhla wokukhutshwa kwelanga